सनातन संस्कारमा गाईको पुजा किन गरिन्छ ? « LiveMandu
सनातन संस्कारमा गाईको पुजा किन गरिन्छ ?
३ पुष २०७५, मंगलवार ०५:३०
नेपालमा आजभोली गाईका बिषयमा धेरै विवाद हुन थालेको छ । पशुपतिनाथको देशमा गौमाताको बिषयमा यो चर्चा परिचर्चा धेरैलाई नौलो अनि दुखद् बिषय हो भने कतिका लागि अधिकारको कुरा हुन सक्ला । खसीबोका, कुखुरा लगायत अन्य थुप्रै जनावर अनि पशुपंक्षिका मासुले नपुगेर अब गाईको मासुका लागि केही नेपाली जीब्राहरु लालाहित भएका हुन या सनातन संस्कारलाई विदेशी प्रभावमा बर्हिगमन गराउनका लागि गरिएको कदम हो ?
विश्वमा संस्कृत अनि सनातन संस्कार र विज्ञानको विशेष चर्चा र अनुयायी बढिरहेको समयमा हामी भने केही बाहिरी तत्वको हात समातेर पुराना कुरा त्याग्दै नयाँ अमूर्त काँचुली फेर्ने बहस गरिरहेका त हैनौ ? यो सबै आआफ्नो छनौट र विवेकको बिषय हो तथापी सत्य र असत्यको छनौटमा कुन पक्ष रोज्ने भन्ने जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै हो ।
हामी आज वैदिक सनातन संस्कारमा गाई प्रतिको सम्मान र गाईको मानव जीवनसंगको निकटताको विज्ञान प्रकाशमा ल्याउँदैछौं । गाईलाई सनातन संस्कारले एउटा पशु भन्दा बढी परिवारको सदस्य अनि अाफ्नो दुध खुवाउने भएकाले आमाका रुपमा लिएको छ । गौदान सनातन संस्कारका हरेक क्रियाकलापमा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृया हो तथापी आजभोली गाई कै पुच्छर समाएर दान गर्न नसकिने भएकाले केही पैसालाई दुना टपरीमा राखेर गौदानलाई विम्बका रुपमा दान गरिन्छ । अर्कोतर्फ गौ हत्या सनातन संस्कारको सबैभन्दा घृणीत कर्म हो । यो एउटा निकृष्ट अनि दानवीय पाप हो । यो महत्वकासाथ सनातन संस्कारमा आखिर किन छ त गाईको यो महान स्थान ? आउनुहोस् आज उत्खनन गरौं गाई र सनातन संस्कारमा हुर्किएका मान्छेबिचको यो अनन्त सम्बन्धको कारक तत्वहरु ।
सनातन संस्कारमा गाई मात्र नभई सर्प, बाँदर, पर्वत, अन्न, वनस्पति लगायत यस पृथ्वी अनि ब्रहमाण्डमा भएका सबै तत्वहरुको पूजा अर्चना गरिन्छ । सनातन देवताहरु बिभिन्न लौकिक तथा अलौकिक स्वरुप र स्वभावमा रहने गर्दछन् र यो भावलाई टपक्कै आजको क्वान्टम फिजिक्सले टिपेको छ । हरेक अवयव अनि तत्वमा शक्ति रहेको क्वान्टम फिजिक्सले वकालत गरिरहनु हजारौं वर्ष अगावै सनातन संस्कारले हरेक अवयवमा भगवान र अनन्त शक्ति रहेको ब्याख्या गरीआएकै हो ।
नेपाल अनि भारतका बिभिन्न शहरहरुमा खुलेयाम गाईहरु हिँडिरहेको तथापी जनमानसले ती गाईहरुलाई सद्भाव अनि प्रेमका दृष्टिले व्यवहार गरेको पाइन्छ । यस्ता नजारा विदेशी भूमिमा एकदमै कम देख्न पाइन्छ । फेरी हामीले बाटाघाटामा गाईवस्तु हिँड्नुलाई राम्रो भन्न खोजिरहेका हैनौं तथापी विश्वको यस पाटोमा गाईसंग समाजको सदियौंदेखिको यो सम्बन्धलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं । अहिलेपनि काठमाण्डौ, बिराटनगर, नेपालगञ्ज, बनारस, कोलकाता, इलाहावाद अर्थात् प्रयागराज लगायतका भारत र नेपालका धेरै शहरहरुमा गाईहरुलाई बाटाबाटै विचरण गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
संसारैभरिका सनातन धर्मावलम्बिहरु अनि हिन्दुहरु गाईलाई परिकल्पना मात्र गर्दा पनि पूजा गर्ने साक्षात देवीका रुपमा परिकल्पना अनि सम्झना गर्दछन, यस अर्थमा हिन्दुत्वको पहिचान र आदर्श नै गाई अर्थात् गौमाता हुन् । निकै वर्ष विदेश बसेतापनि गाईको मासु नखाने अनि खाँदा आफैलाई आफैसंग घृणा लाग्ने र दिगमीग लाग्नेसम्म धेरैको अनुभव छ ।
वैदिक परम्परामा बिवाहको चलनमा पनि वरवधुलाई गौदान गरेर गाई बाच्छो सहित विदा गर्ने चलन थियो र अझै छ यो संस्कार जीवितै छ । यसो गर्नाले वरवधुलाई बिवाहपछि पनि जीवनयापनका श्रोतका रुपमा गाई वस्तु हुँदा जीवनयापन सहज हुने विश्वास छ । यस अर्थमा गाई एउटा जीवन धान्ने आधार, पौष्टिताको धरोहर अनि मानव जीवनको उच्चतम सारथी पनि मान्न सकिन्छ ।
हुन त दुध सेवन गर्नाका लागि भैंसीको पनि उपयोग उत्तिकै हुन्छ या हुन सक्थ्यो तथापि गाईलाई नै आमाको सरह मान्यता र महत्व दिदैं सनातन संस्कारले स्थापीत गराएको छ । भैंसीलाई भने यमराजको वाहनका रुपमा उत्ति शुभसंकेत भएको प्राणीका रुपमा नलिने चलन छ । गाईलाई भगवान विष्णुसंग जोडिएर हेरिएको छ, श्री हरि र गाईको सम्बन्ध प्रगाढ रुपमा लिइन्छ अनि साँढेलाई शिवको अंश मानिन्छ । दुर्गाले भैंसी र आयाप्पाले राँगालाई मारेको कथन पनि रहेको छ ।
बैष्णव धारमा भने गाईलाई धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको अवशेषणका रुपमा लिइन्छ र भाग्वत पुराणमा भने एकदिन समस्त पृथ्वीले गाईको स्वरुपमा प्रकट भएर भगवान विष्णुलाई आफ्नो रक्षा गर्न भनेको कुरा उल्लेख छ । त्यसै कारणले पनि विष्णुलाई गोपाल अर्थात गाईको रक्षार्थ भन्ने बुझिन्छ । काठमाण्डौ शहर विश्वको एउटा प्रि हिस्टोरिक शहर हो अर्थात् यसको इतिहास प्राचीन सभ्यतासंग जोडिएको छ । काठमाण्डौमा शासन गर्ने राजाहरु पनि गोपाल वशं अर्थात गाई पाल्ने वशंका हुन् । पशुपती र गाईको सम्बन्ध पनि प्राचीन कालदेखि नै विशेष रुपमा छ । समग्र चित्रमा हेर्ने हो भने यस धर्तीलाई नै गाईको स्वरुपमा लिन सकिन्छ र धर्तीले पालन पोषण गरेकी हामी समस्त मानव जातीहरु उनै धर्ती गौमाताको विशाल काखमा बसेका छौं ।
हरेक पटक जब जब धर्तीमा गौहत्या र पाप बढ्न थाल्छ तब तब कृष्ण अनि परशुरामका रुपमा गौ रक्षकहरु आउँदछन् भनी विभिन्न वैदिक श्लोक अनि कथनमा पटक पटक आउँदछन ।
श्रीमद्भागवत् गीतामा कृष्ण स्वंयमले अर्जुनलाई युद्धका लागि सम्झाउँदा भनेका भनेका कुरा उल्लेख गर्न चाह्यौं । अर्जुनले आफ्नै मान्छेका विरुद्धमा नलड्ने अनि यूद्धले कसैको रक्षा नहुने बताउँदछन् । तब कृष्णले धर्मको रक्षार्थ अर्जुनलाई निम्न श्लोकहरु मार्फत संझाउँदछन् ।
तब तब धर्मको रक्षाका लागि म स्वंयम यस धर्तीमा नयाँ अवतार लिएर आउनेछुँ ।
हे अर्जुन, अब तिमी पनि यस युद्धमा धर्मको रक्षार्थ अनि अधर्मको नाशार्थ सामेल हुनुपर्नेछ र यो नै तिम्रो कर्तब्य हो भनेर अर्जुनलाई श्री कृष्णले युद्धका लागि सम्झाएका हुन् ।
त्यस्तै अर्को प्रसंगमा भगवान ईन्द्रसंग कामधेनु गाई भएको कुरा उल्लेख छ, दुधको सागरबाट आएको यो कामधेनु गाई कल्पबृक्ष समान मानवका सम्पूर्ण ईच्छा आकांक्षाहरु पुरागर्न सक्षम रहेको कुरा उल्लेख छ । कल्पवृक्ष आजभोली बोलीचालीको भाषामा न आउने एउटा लोपोन्मुख शब्द भइसक्यो तथापी हाम्रो परम्परागत समाजमा यो शब्द एउटा ज्योर्तिमय शब्द हो । हरेक इच्छा आकांक्षा पुरागर्ने एउटा रुखका रुपमा कल्पवृक्षको चिनारी वैदिक सनातन संस्कारका अनेक ग्रन्थमा कल्पवृक्षको परिभाषा पाइन्छ ।
स्वर्गलोकमा एकदिन कौशीकाले यस कामधेनु गाईको चोरी गर्न खोज्दा गाई स्वंयमले सैनिकहरु सृजना गरेर आफ्नो रक्षा गरेको पनि कथन छ ।
यसै गरि महर्षि जमदग्नीको पनि यस्तै गाई रहेको र कर्त्भियार्जुनले उक्त गाईको चोरी गर्न खोज्दा परशुराम अर्थात् जमदग्नीका पुत्रले कर्त्भियार्जुनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर नाश गरेको कथन पनि छ । रघुभाषामाका अनुसार भगवानका रामका पुर्खा दिलीपले बाघ, भालुबाट अाफ्नो गाईलाई जोगाउनका लागि आफैलाई जनावरका सामू भोजन स्वरुप सुम्पिएका थिए ।
गाईलाई दुध खाने या पाल्ने जनावर मात्र नभई रक्षा गर्नुपर्ने जनावरका रुपमा पनि लिइएको छ । मलमुत्र देखि दुधसम्म गाईका हरेक कुरा महत्वपूर्ण छन, गाईको हत्या प्रकृतिप्रतिको अवहेलना हो । अहिले विश्वभरिनै गाईको रक्षाका मुद्दाहरु उठिरहेका छन, भारतमा त गाईको मासु खाने समूदाय र नखानेबिच एकप्रकारको मौन युद्ध जस्तो नै परेको छ ।
गाई देख्दा मासु र भोजन भन्दापनि शालिनता अनि सद्भावको भावहरु आउन जरुरी छ, मासु खान त अन्य प्राणीहरु पनि उत्तिकै छन नि, हैन र ? दुध जसरी आमाको शरीरबाट सेवन गरिन्छ त्यसैगरि गाईपनि आमासमान मानिन जरुरी छ । गाईको महत्व सनातन समुदायसंग मात्र नभई सबैसंग र सबैकालागि उत्तिकै छ ।
कृष्णको महिमा पनि त गाईका रक्षक र ग्वालाकारुपमा धेरै गरिएको पाइन्छ । भागवतमा कृष्णले राक्षस साँढे अरिस्थ र राक्षस बाच्छो भास्तको वध गरेको उल्लेख छ । वौद्धमार्ग र जैनमार्गमा पनि शाहाकारी र शान्त मनोभावमा वैद्धिक संस्कार र गौस्मरण र गौप्रेम जोडीएर आएको पाइन्छ । अझ जयदेवका अनुसार त वुद्धलाई पनि भगवान विष्णुका अवतारका रुपमा लिइएको छ । गाईको पालपोषण गर्न रुख, बिरुवा, खाली ठाँउ, जगंल अनि खुल्ला चौरहरु आवश्यक हुन्छ र यसो खाली ठाँउ र वनस्पती हुनाले पर्यावरण पनि राम्रो हुन्छ ।
महाभारतको ब्याधा गीता खण्डमा एकजना कसाईको कथा छ, यस कथाको सारसंक्षेपमा खानाका लागि गरिने हिंसा र सत्ता र शक्तिका लागि गरिने हिंसा उस्तै भएको कुरा उल्लेख छ । वन जङ्गल फडानी र विषालु वनस्पतीहरुलाई खाएर नष्ट पार्ने जनावरहरुमा भैंसी अनि राँगाहरु उल्लेख भएको पाइन्छ ।
बिगतका १०० वर्षहरुमा भारतीय महाद्विपमा ईस्लाम अनि इसाईको प्रवेशसंगै गौहत्या र गाईको मासु खाने निकृष्ठ चलन शुरु भएको हो । हामीलाई हरेक धर्मको सम्मान गर्न आउँदछ तर जब जब हाम्रो संस्कार अनि सभ्यताको मूल मियोमा आहत पर्न थाल्दछ तबतब हामीले पनि धर्मको रक्षार्थ अघि बढ्न जरुरी हुन्छ ?
जीवहत्या महापाप हो अनि अझ गौ हत्या निर्घिन अपराध हो । सनातन संस्कारको शुद्धीकरण अनि गौस्नेहका अभ्यासहरुको भित्री मर्म नबुझेर पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ । सिन्धूघाटी सभ्यताको आधार गाई अनि मानवबिचको यो सम्बन्ध र स्नेह अपरिहार्य छ ।
पुराणहरुमा पनि गाईको पूजा भनेको समस्त हिन्दु देवताहरुको एकै पटक पूजा गरे बराबर रहने भनिएको छ । मान्छे, पहाड, झरना, आकाश, पानी लगायत सम्पूर्ण कुराहरु भित्र भएको गाईका तस्वीर यूक्त पौराणीक चित्रहरुले गाईको सर्वत्र शक्ति र महिमाको व्याख्या गरेको छ । गाईभित्र मात्र हिन्दु भगवानहरु छन् भनेर हिन्दुत्वमाथी आक्रमण गर्न गौहत्यालाई प्रश्रय दिनु महान मुर्खता हो ।
#यदा यदा ही धर्मस्य